Mashiinka Goynta Laser Flatbed - Laser Dahab ah
Mashiinka Jarida Vision Laser
Mashiinka CO2 Galvo Laser
Digital Laser Label dhinta-magaabay
CO2 Laser magaabay xardha
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Laser
Goynta Xaashida Birta
Xaashida Birta Labada ah & Goynta tubada
Gawaarida & Duulista
Mashiinka Hawo-qaadista Dharka
Label, Caag, Cajalad milicsiga
Saxannada Sandwich Saxannada
Dharka iyo Dharka
Roogga & Mat
Ku saabsan Laas Laser (PDF)
Maxaa Laser Dahab ah
Taxanaheena udambeeyay ee CO2 mashiinada goynta laser flatbed waxaa loogu talagalay inay noqdaan qaab weyn, xawaare sare, saxnaan sare iyo otomaatig sare.
Nidaamyada farsamada ee hogaaminaya warshadaha, nidaamyada wadada indhaha, iyo nidaamyada xakamaynta waxay hubinayaan xawaaraha sare iyo xasilloonida sare ee mashiinnada goynta laser-ka. Gawaarida gawaarida gawaarida iyo gawaarida gawaarida iyo gawaarida waxay bixiyaan dhaqdhaqaaqyo sax ah oo leh dardargelinta 8000mm / s2.
Noocyo kala duwan oo qaabab shaqo ah ayaa la heli karaa, kuwaas oo si wax ku ool ah ula jaan qaadi kara baahiyaha wax-qabad ee warshado kala duwan iyo qeexitaanno. Oo weliba waxaannu astaysto qaab goynta ku habboon baahiyaha wax soo saarka gaarka ah.
CO2 DC laser tube galaas ama tube laser laser biraha waa ikhtiyaari iyadoo loo eegayo shuruudaha warshadaha iyo farsamaynta. Mashiinnadayada goynta leysku fidsan yahay waxaa lagu qalabeyn karaa 80 watts, 130 watts, 150 watts, 200 watts, 300 watts, 600 watts, 800 watts iyo xitaa laser CO2 awood sare leh.
Qaab No.: JMCCJG / JYCCJG Taxanaha
Xawaaraha Sare Warshadaha Dharka Mashiinka Mashiinka Laser
Taxanahan Mashiinka goynta laser-ka flatbed-ka ah ee loo yaqaan 'CO2 flatized' waxaa loogu talagalay duub ballaaran oo dhar jilicsan ah iyo qalab jilicsan oo si otomaatig ah oo joogto ah u goynaya. Lagu wado gawaarida iyo sagxadda mashiinka adeegga, mashiinka laser-ka wuxuu bixiyaa xawaaraha ugu sarreeya iyo dardargelinta.
Qaab No.: JMCCJG-350400LD
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Goynta Laser ee Warshadaha Sifeynta Warshadaha
Qalabka saxda ah ee saxda ah iyo salka lagu wado. Xawaaraha goynta illaa 1200mm / s. CO2 RF laser 150W ilaa 800W. Nidaamka wareejinta faakiyuumka. Auto-feeder leh saxitaanka xiisadda. Ku habboon jarista dharka miiraha, gogosha miiraha, caagagga, PP, maroogga, PTFE iyo dharka warshadaha.
Qaab No.: JMCCJG-250350LD
Mashiinka Jarida Laser-Airbag-ka oo leh lakab-kala-goys ah oo leh lakabyo badan
Xalalka Goldenlaser ee loogu talagalay goynta leysarka airbag-ga ayaa hubiya tayada, badbaadada iyo keydinta, ka jawaab celinta kororka iyo kala duwanaanta barkadaha shilka ee looga baahan yahay heerarka amniga ee cusub.
Qaab No.: JMCCJG-160200LD
CO2 Laser magaabay wiil for Xidhmada Heat yaraanaya Sleeve ilaalinta
Mashiinka laser-ka gaar ahaan loogu talagalay dharka kuleylka leh ee kuleylka kuleylka ah ee ka sameysma PET (polyester) fiilooyinka dunta iyo yaraynta fiilooyinka polyolefin. No fraying of geesaha goynta ay sabab u tahay goynta laser casriga ah.
Qaab No.: JMCZJJG (3D) -250300LD
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka
Isku dar ah qaab weyn X, Y dhidibka laser goynta (gooynta) iyo xawaaraha sare Galvo laser perforating (laser cut godad). Waxaa loogu talagalay jarista mareenka hawo-qaadashada dharka (sock duct, sox duct, sox soct, sock sock, marinka hawo dharka, sock hawada, hawada sox)
Qaab No.: JYCCJG-160600LD / 160900LD / 1601300LD
Ultra-dheer Miis Mashiinka Goynta Laser
Sariir Goynta Dheeraad ah - Takhasus 6 Mitir ilaa 13 Mitir cabirrada sariirta ee alaabada dheeriga ah, sida teendhada, marada dhogorta, baarashuudka, paraglider, daar, marquee, shiraac, parasail, sunshade, rooga duulimaadka viation
Qaab No.: JMCCJG-250300LD
Mashiinka Goynta Laser CO2 ee Dharka Farsamada
Mashiinka goynta laser-ka ee loo yaqaan 'gear & rack drive' waa mid xoogan oo ku filan inuu qaado awood sare COB laser tube. Waxay ogaaneysaa xawaaraha xawaaraha sare ee sarreeya iyo jarista xawaaraha leh duulaya.
Qaab No.: JYCCJG-210300LD
Mashiinka Mashiinka Goynta Laser
Mashiinka goynta leyska rooga ee aan-tolmo lahayn, polypropylene fiber, dhar isku dhafan, leatherette iyo gogosha roogag badan. Miiska xamuulka qaada oo ay ku jiraan quudinta baabuurta. goyn degdeg ah oo joogto ah
Qaab No.: JMCCJG-230230LD
Mashiinka Goynta Laser ee Nylon, Polyamide, Maro adag, Nonwoven
Mashiinka mashiinka wax lagu gooyo wuxuu ku habboon yahay goynta noocyo kala duwan oo jilicsan oo ay ka mid yihiin dharka, gaskooyinka, dharka kululaynta kuleylka, iyo dhar farsamo oo loogu talagalay dalabyo badan oo kala duwan oo ka socda warshadaha sifeynta iyo warshadaha baabuurta.
CO2 Laser magaabay
Vision Laser magaabay
Flatbed Laser magaabay
Digital Laser dhinta magaabay
Yar Yar CO2 Laser
Daabacaadda Dijital ah
Roogaga & Mats
Bandhigyada Adduunka oo dhan
Goldenlaser Industrial Park, Tianxing Road, Chuanlong Avenue, Degmada Huangpi, Wuhan, Hubei, Shiinaha